उदयपुर अस्पतालका डाक्टरहरु जिर्ण भवनमा बस्न बाध्य -
उदयपुर । पछिल्लो समय उदयपुर जिल्ला अस्पताललाई ‘उपस्वास्थ्य चौकीसरह पनि उपचार सेवा दिन नसकेको’ भन्दै जिल्लाबासीले कडा आलोचना गरिरहेका छन् । हुन पनि अस्पतालले जिल्लातहको स्वास्थ्य सेवा पटक्कै दिन नसकेको स्वयं डाक्टरहरुले पनि स्वीकारेकै छन् । तर, यसो हुनुमा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र कमजोरी हो कि भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनपक्षको बेवास्ताको सिकार पनि भएको हो अस्पताल ? अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु भने आवासलगायत थुप्रै असुविधाको सिकार भएर काम गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट आस्था सुब्बाले अस्पतालको धेरै आन्तरिक पक्ष कमजोर रहेको गुनासो गरिन् । पहिलो कुरा दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको कमी छ, त्यस्तै आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरुको अभावले अस्पतालले चाहेजस्तो सेवा दिन नसकेको उनी स्वीकार्छिन् । ‘बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सेवा नदिएको मात्र देखिन्छ’ २ वर्षदेखि कार्यरत दन्त चिकित्सक सुब्बाले आन्तरिक कुरा कोट्याईन् ‘भन्न त भित्रि कुरा के भनिराख्नु तर, विरामीले सन्तोषजनक सेवा पाउन नसक्नुमा धेरै आन्तरिक समस्या छन् ।’
सुब्बाका अनुसार ५० शैय्याको अस्पतालमा १० र ११ औं तहका विषेशज्ञ (कन्सल्टेन्ट) देखि तहविहीन कर्मचारीसम्म ५९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि आठौं तहका ४ र सातौं तहका ३ जनाबाहेक मुख्यमुख्य दरबन्दी अहिले पनि रिक्त छ । ११ औं तहका मेसुको दरबन्दी ३ महिनादेखि रिक्त रहेकाले आठौं र सातौं तहकाले निमित्त कार्यभार सम्हाल्नुपरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा सुविधासम्पन्न भवन देखिने अस्पतालका अधिकतर डाक्टर र नर्सलाई आवासगृहसम्म छैन । क्वाटर अभावमा ४० वर्षअघि बनेका भूकम्पले जर्जर २ वटा आवासगृह र ससाना ४ वटा प्यारामेडिक टहरामा स्वास्थयकर्मीहरु बास बस्न बाध्य छन् ।
मेसुका लागि निर्मित ४ कोठाको एकतले पुरानो भवन भूकम्पले हल्का चर्केको छ । तर, बस्नै नहुने गरी जर्जर भएर चर्केको अन्य डाक्टरहरु बस्ने बहुकोठे २ तले (फोर क्वाटर) भवनमा ६ डाक्टर परिवारसहित बस्नुपरेको छ । जर्जर भईसके पनि अर्को उपाय नभएर ४ परिवार बस्ने भवनमा ६ परिवार बस्नुपरेको हो । चर्पी नभएको भत्केको भवनमा बस्नुपर्दा निमित्त मेसु डा. सुब्बासहित ५ जना मेडिकल अधिृकतले एउटै चर्पीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘चर्पी नहुनु सामान्य हो तर, चर्केको सिलिङबाट घरीघरी सुतिरहेका बेला सिमेन्टको पाप्रा उप्किएर झर्ने गरेको छ’ अर्की डा. पुष्पलता जोसीले भनिन् ।
‘सामान्य भूकम्प गयो भने गल्र्यामगुर्लम ढल्ने भवन छ’ चिन्तित मुद्रामा उनले भनिन् ‘कति दुःख गरेर डाक्टर पढियो, सानो भूकम्प गयो भने झिरिप्प हुने ठाउँमा जागीर खानुपरेको छ ।’ क्वाटर अभावमा बाँकी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पुरानो अस्पताल भवनमा खाँदाखाँद गरेर राख्नुपरेको निमित्त मेसु सुब्बाले बताईन् । क्वाटर भवन नहुँदा भत्कन लागेको पुरानो अस्पताल भवनलाई पनि आवासगृह बनाइएको छ । झण्डै एक दर्जन स्टाफलाई पुरानो अस्पताल भवनमा राख्नुपरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बिर्ख खत्रीले बताए । क्वाटर र अन्य सुविधा नभएकाले पनि हतपत राम्रा डाक्टरहरु आउन नमान्ने र आए पनि अन्यत्र सरुवा लिएर गईहाल्ने गरेको उनले बताए ।
‘एकातिर कन्सल्टेन्टहरु उदयपुर आउनै मान्दैनन्, आए पनि क्वाटर नभएको देखेपछि बस्न मान्दैनन्’ सुब्बाले भनिन् ‘परीक्षणलकालीन र करारका डाक्टर पनि करियर बनाउन मात्र धन्न बस्छन्, बस्ने ठाउँदेखि काम गर्ने वातावरणसम्म राम्रो नभएकैले कोही टिक्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।’ पहिलेका डाक्टरहरु जनस्वास्थ्य अधिकृतको पनि जिम्मेबारी पाउने गरेकाले स्वास्थ्य भवनमा बस्ने गरेका थिए । तर, ५० शैय्याको स्वीकृत पाएपछि अस्पताल र जनस्वास्थ्यको अलग अलग प्रशासनिक जिम्मेबारी बाँडिएपछि अस्पताललाई मात्र क्वाटर अभाव भएको हो ।
डाक्टरहरुका लागि अस्पतालले २ वटा २÷२ तले पक्की डाक्टर क्वाटर र एउटा ३ तले स्टाफ क्वाटर भवन निर्माण थाले पनि सकिन कम्तीमा २ वर्ष लाग्नेछ । गत कात्तिकदेखि सुरु १६÷१६ कोठाका २ वटा भवनमध्ये एउटाको काम भर्खर २० प्रतिशत र अर्काको ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । निर्माण कम्पनी विरुवा–भुस्नाम्छा जेवीले बनाईरहेको उक्त भवन २ करोड ८४ लाखको लागतको हो । विरुवा–भुस्नाम्छा जेवीका सञ्चालक विनोद पाण्डेले १८ महिनाभित्र बनाईसक्ने सम्झौताको उक्त भवन सकेसम्म निर्धारित अवधिभित्रै सक्नेगरी काम भईरहेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ उदयपुरका अध्यक्षसमेत रहेका भुस्नाम्छाका सञ्चालक भिम राईले सकेसम्म तोकिएको अवधिभित्रै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी काम भईरहेको बताए । ती भवन बनेपछि भने ८ जना डाक्टर परिवारलाई शौचालय र कम्पाउण्डसहितको आवास सुविधा मिल्नेछ । अर्को ३ तले स्टाफ क्वाटर भवन पनि निर्माणाधिन छ । २ करोड ९२ लाखको लागतमा निर्माणाधिन यसै आवदेखि सुरु उक्त भवन निर्माणको जिम्मा रौताहा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।